12 / 04 / 2019 18 / 04 / 2019 ရော့ Paton 1239 Views စာ0မှတ်ချက် 75894 1967 Mini Cooper S ပြိုင်ပွဲနှင့် 2018 MINI John Cooper Buggy အလုပ်လုပ်သည်, Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း, Lego, Lego မဂ္ဂဇင်း, Lego Mini, Lego စတိုး, Lego စတိုး Cardiff
တရားဝင်မှည့်သည်များ Lego စတိုး Cardiff အတွက်တွေ့နိုင်ပါသည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း၏နံပါတ် ၄ မျက်နှာဖုံးကိုဖော်ပြသည်
ဘို့ စတုတ္ထထုတ်ဝေ အားလုံးအကြောင်းကိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ၏ Lego, Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ၁၉၆၇ Mini Cooper S Rally ကိုပြသရန်အထူးဖန်တီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်နာမည်ကြီးပန်ကာတည်ဆောက်သူ Simon Pickard အားတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ပါဝင်သည်အဆိုပါအထင်ကရကားတစ်စီး 75894 1967 Mini Cooper S ပြိုင်ပွဲနှင့် 2018 MINI John Cooper Buggy အလုပ်လုပ်သည်၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းကာလများအတွင်း Monte Carlo ပြိုင်ပွဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်၊ အုတ်ပုံစံဖြင့်နှင်းပွင့်ပြိုင်ပြိုင်ပွဲအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လမ်းထောင့်တစ်လျှောက်နှင့်ဆင်ခြေလျှောတွင်လမ်းဖောက်ရန်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားသောရှိမုန်၏တည်ဆောက်မှုသည်အဓိကကျသောအရာဖြစ်သည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်းကာရစ်ဖ်၏အရာရှိတွင်လူကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်သည် Lego စတိုး.
အဆောက်အအုံသည်စတိုးဆိုင်၏ပြသမှုအစုအဝေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊art of Lego ထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စတိုးဆိုင်များ '' ပူးပေါင်း Lego အသုံးပြုသူများ၏အုပ်စုများ၊
ဤတည်ဆောက်ပုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြည့်ရှုရန်သေချာပါစေ၊ ထိုသို့သောနည်းလမ်းဖြင့်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နံပါတ် (၄) တွင်မျက်နှာဖုံးနှင့်လှပသောနှစ်ဆမျက်နှာရှိသောကျွမ်းကျင်သောဓာတ်ပုံပြန့်ပွားလေးခုပါအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းပြသနိုင်သည်။
၏ပြ4နာ XNUMX Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း WHSmith စတိုးဆိုင်များတွင်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံတလွှားကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် brickfanatics.com/magazine.
← Ai Weiwei သည်နောက်ဆုံးပေါ် LEGO အလုပ်ကိုပြသခဲ့သည်
အဆိုပါ Watch Star Wars အပိုင်း IX panel ကိုတိုက်ရိုက် →